Indlu ekumhlaba osikelwe izindlu yonke sinombuki zindwendwe onguTristan
Yakhelwe kwiParish Ocean City kukho indlu yaseAcacia, igumbi lokulala eli-2, igumbi lokuhlambela eli-2 elinesiqingatha elihonjiswe kakuhle, linika umbono woLwandlekazi. Le ndlu i-1400 square feet 2 yemigangatho yendlu ineebhedi ezi-2 zokumkanikazi, amagumbi okulala anomoya ogcweleyo, amagumbi okuhlambela abanzi kunye negumbi lokulala ngalinye elikhokelela kwibalcony encinci. Le propathi yoluka intuthuzelo kunye nobomi besiqithi bubuhle bungaphakathi kwekorale, imbonakalo yomhlaba entle, ikhitshi elixhotyiswe ngokupheleleyo kunye nokuhombisa isitayile.
Indawo ivumela kakhulu zonke iintlobo zeendwendwe. Nokuba yeyeshishini okanye ulonwabo. Ezinye ii-sundries ziya kubonelelwa, kunye nokuzonwabisa kwakho kuya kubandakanya umabonwakude weNethiwekhi, umabonwakude we-Intanethi, kunye ne-PlayStation console. Izibonelelo ezingqongileyo ziquka iivenkile ezinkulu ezimbini (i-Trimart kunye ne-Emerald City), iZikhululo zeGesi ezintathu ezinedelis kunye nekliniki yabucala nekarhulumente.
Indlu inamaziko e-BBQ ukuba iindwendwe zifuna ukuba nazo zokupheka zangaphandle.
Ubumelwane buzolile kakhulu. Iphumile kwindlela yebhasi kwaye ke ayinqulwanga kakhulu.
Umbuki zindwendwe ngu- Tristan
Siya kuququzelela yonke imisebenzi yosapho ebonelelwa ngamaqumrhu abucala. Oku kunokubandakanya kodwa kungaphelelanga apho: ukubhola, ukukhwela ihashe, igalufa, intenetya, ukhenketho lwesiqithi, ukuthenga kunye nokunye okuninzi.